Shabaab oo Xoog Kula Wareegay Idaacadda Markabley Baardheere Una Bedelay Al Andulus
Apr 30, 2012 - jawaab	Number of View: 405Share
Baardheere:- Dagaalyahano katirsan shabaabka Gedo ayaa saaka gudaha u galay xarunta Idaacadda Markabley ee magaalada Baardheere waxayna amar buuxa ku bixiyeen in la xiro gebi ahaanba Idaacadda laguna soo weraajiyo furaha.
Shabaabka saaka la wareegay Idaacada Markableey ayaa waxaa hogaaminaayay Barre Qooje oo ah Gudoomiyaha maamulka degmada Baardheere iyo sidoo kale rag ka socda xafiiska warfaafinta Al shabaab.
Barre Qooje iyo Ciidamadiisa ayaa Maamulka iyo shaqaalaha Idaacadda Markableey waxaa ay ku amreen inay soo wareejiyaan furayaasha xafiisyada Idaacada ayna gabi ahaanba isaga baxaan dhismaha Idaacadda, sida ay noo xaqiijiyeen goobjoogayaal.
Maamulka Idaacada Markableey oo aan la xariirnay ayaa inoo xaqiijiyay in Ciidamada saaka la wareegay Idaacadda ay u sheegeen in amarka ay kula wareegeen Idaacadda uu yahay amar sare oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta iyo siyaasada xarakada Al shabaab.
Warar hoose oo ay shabakada wararka ee Sooyaalnews.com heshay ayaa sheegaya in Idaacadda Markabley ee ay shabaabku la wareegeen saaka magaceeda lagu badali rabo Idaacadda Al Andulus oo ku hadashada afka xarakada Al shabaab.
Wararkii ugu dambeeyey ee iminka naga soo gaaraaya Baardheere ayaa soo sheegaaya in Idaacaddii Markabley ee Baardheere goordhow lagu dhawaaqay in loo bedelay Al Andulus ayna u shaqayn doonto Al shabaab.
Magaalada Baardheere hadda waxaa ku suggan rag ka socda xafiiska warfaafinta iyo siyaasada ee xarakada Al shabaab kawaas oo uu ka mid yahay Agaasimaha guud ee Idaacadda ku hadasha afka Al shabaab ee Andalus Xasan Xanafi.
Al Shabaab ayaa horay ula wareegay Idaacado badan oo ka hawlgali jiray magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka waxayna dhamaantood ka dhaceen qalabkii muhiimka ahaa iyaga oo markii dambe ka yagleeyey Idaacadda Al Andulus ee afkooda ku hadasha.